IiMacs eziza kongeza kuluhlu olungasasebenziyo lweApple ngoDisemba ngo ... | Iindaba zeGajethi
Kwangoko i-MacBook Pros ye-15- kunye ne-17-intshi, phakathi kuka-2011 iMacBook 13, kunye ne-2009 yee-Mac. Kucace gca kuApple ukuthatha isigqibo ngeemodeli eziza kuba ngaphandle kwenkxaso esemthethweni kwiVenkile esemthethweni yeApple okanye kwiivenkile ezigunyazisiweyo.
Ubomi obuluncedo bezixhobo zeApple bunokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi kokuxhomekeka kukhathalelo lomsebenzisi kwaye ngaphezulu kwayo yonke inkxaso enikwa ngumenzi kwiimveliso zayo, ngenxa yesi sizathu izixhobo ezitsha zongezwa kuyo amaxesha ngamaxesha. uluhlu lweemveliso eziphelelwe lixesha kumzi weCompertino.
Xa sijonga imihla yala maqela singatsho ukuba ixesha abanalo lobomi kunye neendlela zokuzilungisa kwiivenkile ezisemthethweni zilungile ngenene ngaphandle kokuphuma kwewaranti. Ngokucacileyo abasebenzisi abanezi zixhobo akufuneki babandezeleke ukuba izixhobo zabo zisebenza ngesiqhelo, kuba intsingiselo yokuba "iphelelwe lixesha" yeApple kukuba akukho zixhobo zisezitolo kwiivenkile ezisemthethweni, kodwa Oko akuthethi ukuba ukuba sinengxaki singayisombulula kwi-SAT okanye kwivenkile yethu ethembekileyo.
Ulwazi luye lwatyhilwa yiwebhusayithi eyaziwayo yemveliso yeApple MacRumors Kwaye nangona kuninzi oku kungabonakala ngathi sisiphelo sobomi bamaqela abo, siyaphinda ukuba ayinanto yakwenza nako. Uluhlu lukhula unyaka nonyaka odlulayo kwaye kuyinyani ukuba kulo sifumana iimodeli namhlanje eziqhubeka nokusebenza ngaphandle kwengxaki, ke akufuneki ukuba sikhathazeke ukuba sinenye yezi Macs.
Kuba abo banomdla ngakumbi kuwe Sishiya uluhlu olupheleleyo lwezixhobo eziphelelwe lixesha Ezivela kwifayile ye- iwebhusayithi yeapile kwaye apho sifumana khona izixhobo ezimbalwa eziphathwayo, ii-iPods, iipheripherali kunye neekhompyuter zecompertino firm, ethi kwinyanga ezayo iqiniswe yiMac ekhankanywe ekuqaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IiMacs eziza kongeza kuluhlu lwe-Apple engasasebenziyo ngoDisemba ...